Vaovao - Fihaonambe manokana
tantanana fandravana herinaratra
tantanana rotary herinaratra
grinder zoro lasantsy
fandavahana fototra lasantsy
milina fanapahana lasantsy
lasantsy tany auger
lasantsy vokarin'ny lasantsy
mpamily pile petrole
mpamily lasantsy sy tantanana
tantanana rotary lasantsy
fandavahana hazo lasantsy
mpamindra hazo lasantsy
Tamin'ny 3:30 hariva tamin'ny 7 aogositra 2020, ny fivorian'ny orinasa dia nanao fihaonambe manokana momba ny vokatra lehibe tao afovoan'ny foiben'i Yongkang. Ireo orinasa avy amin'ny indostrian'ny fitaovana dia nantsoina manokana hanatrika ny fihaonambe. Nandritra ny fanomanana am-pitandremana, ny orinasanay dia nampiseho ny marotoa famotehana herinaratra JH-168A 2200W, marmora fandravana herinaratra JH-4350AK, marotoa fandrodana herinaratra JH-150 ary vokatra vaovao hafa ho an'ny mpanatrika.
Amin'ny fikatsahana hatrany ny fampiasa sy ny fanavaozana, ny fikaroham-bokatra sy ny fampandrosoana ny orinasanay dia manaraka ny fironana, ahafahana manavao, mamorona andian-vokatra noforonin'i Jiahao manokana. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny famolavolana ny vokatra sy ny famokarana mba hanao ny fampandrosoana sy fanavaozana mifandraika. Indrindra amin'ny vokatra menaka, manohy mamorona karazana vaovao izahay, asa feno, fahamboniana, ho an'ny paikady varotra amin'ny ho avy, manome ny sosokevitra mifanaraka amin'izany koa izahay ary mitarika ny làlan'ny varotra vokatra ho avy.
Ho an'ny fampandrosoana amin'ny ho avy sy ny drafitra fanovana stratejika an'i Jiahao dia nanazava ihany koa ny orinasanay. Amin'ny vanim-potoanan'ny toekarena voa, dia tsy maintsy manova sy manavao ary mamorona modely sy fantsona vaovao amin'ny varotra ara-barotra isika. Amin'ity fomba ity ihany no ahafahantsika mizara ny dividendan'ny tsena ary mahatsapa ny fiaraha-miaina mandresy.
Nafana fo tamin'ny fivoriana ny rehetra. Ireo mpiasa eo an-toerana dia nanazava tamim-paharetana sy naneho ireo vokatra vaovao, ao anatin'izany ny fisehoan'ny vokatra, ny fomba fiasa tsara, ary ny antsipirian'ny famolavolana, ny endri-javatra, ny asany sns ... mba hahafahan'ny mpiantoka franchise mahazo fahatakarana bebe kokoa momba ny vokatra tsirairay ary hanamafy ny drafitr'izy ireo amin'ny traikefa.
Manantena izahay fa amin'ny alalàn'ity fampirantiana ity dia afaka mampita ny mombamomba ny fivoaran'ny orinasanay amin'ny ho avy izahay, ary hianatra bebe kokoa momba ny fampahalalana momba ny hevitra momba ny tsena sy ny mombamomba ny fangatahan'ny mpanjifa.
Yongkang Jiahao Tool Co., Ltd, faritra Yupi Industrial, làlana andrefan'ny tanàna, Yongkang, Faritanin'i Zhejiang 321300, PRChina
Antsoy izahay izao: 0086-13906792067